SomaliNet Magazine: DISEEMBER 2002
ARRIMAHA BULSHADA: FARRIIN KU SOCOTA WAALIDKA - II DADAAL AAN KUU DARAREE
Arrimaha Bulshada: Farriin ku socota Waalidka: II DADAAL AAN KUU DARAREE
W/Q: Fowzia Cubayd
AS/C/WW Waxaa la ogyahay inta badan waalidku hadduu ubadkiisa ku tarbiyeeyo tarbiyad saalix ah oo ku salaysan diinta Islaamka in ay ubadkaasi wanaagsanaadaan ayna noqdaan kuwo waalidko
BARNAAMIJKA XIDDIGAHA: TABABARE FU\_'AAD SH .IBRAAHIM (FU\_'AAD FUJUU)
Fu\_'aad Shiikh Ibraahim oo bulshada isboortiga Soomaaliyeed ay u yaqaaniin \_"fu\_'aad Fujuu\_" ayaa ka mid ahaa dadka sida aadka ah loogu qadariyo ciyaaraha Soomaaliyeed, gaar ahaan kubbadda koleyga oo uu xilliyo kala duwan ku soo dhex jiray isaga oo marna ahaa ciyaartooy, marna ahaa tababare, waxa
DHAQANKA: XUSHMADDA IYO MAAMUUSKA XIDIDKA
Intii aysan raad nagu yeelan ilbaxnimada daciifka ah oo dhaqanka u noqotay Soomaalida reer magaalowday, beelahayaga reer miyiga ah waxaa u dhaqan ahaa in ay ka guursadaan
DIINTA: SU\_'AALIHII IYO JAWAABIHII BISHAAN
Diyaariye: Anisa Ali
Su\_'aal: asalaamu caleykum; waxaan qabaa su\_' aal walalayaal su\_' aasha aan qabo waa:
wiil baa sino galey,sinada markuu galayna waa ka toobad keenay laakiin sharciga Islaamka ma uu isku dhiibin toobaddda ma
DIINTA: 70KA DANBI EE UGU WAAWEYN (AL-KABAA\_'IR)
Danbiga 14aad: Dagaalka Jihaadka oo laga cararo (dhabarka la jeediyo)
Waxaa ka mid ah danbiyada waaweyn in qofku cararo ama baqdo iyada oo jihaad lagu jiro. Ilaahay waa inoo ka digay in aan dhabarka jeedino iyada oo jihaad lagu jiro, wuxuu Ilaahay inoo sheegay in ay caro Ilaahay ku
FANKA IYO SUUGAANTA: SHEEKO TAXANE AH - ALLA MA IYADIIBAA- ALLA MA ISAGIIBAA?
Labadii nin ee fariinta u waday Mulac sidii ayay u radinayeen,laakiin kuma guulaysan in ay helaan. Waxay iyaguna ku tukadeen misaajid u dhawaa kii uu Mulac ku tukaday. Intii haddaba salaadii la galin ayay waxay la hadleen sheekhii misaajidka oo ay uga sheekeeyeen wixii dhacay, iyo maydkii
ARRIMAHA BULSHADA: HAYSASHADA DHAQANKAAGA IYO DHEXGALIDDA UMMADO KALE
Waxaan shaki lahayn in ummad kastaa leedahay dhaqan u gaar ah oo ka sooca ummadaha kale ee adduunka kula nool, ummad kastaana waxaa ay ku faantaa dhaqankeeda soo jireenka ah oo ay ku abtirsato. Sidoo kale, dhaqan kastaa wuxuu leeyahay dhinacyo fiican iyo kuwa aan fiicneyn, marka loo
Taladii akhristayaashu ay u soo jeediyeen gabadhii ninkeeda ka wayday raganimadii.waxaan ahay gabadh da\_'deedu tahay 22 waxaan ku noolahay wadanka dibadiisa waxan guursaday wiil dhalin yaro ah alxamdulilaah iska shqaysta aan ka helay nolol fiican oo aad u sarysa maadama ay reerkenu ahayeen dad
RUMAYSO AMA HA RUMAYSAN: FAALALOW NOSTRADAMUS.
Nostradamus waxyaabahauu saadaaliyey qarniyadaan danbe oo la arkay way badnaayeen waxaan ka soo qaadan karnaa:
Wuxuu gabay ku yiri: London waxaa aafayn doona dab ayan horey u arag dabkaas oo daadin doona dhiig badan hanti badana khasaarin doona, dabkaasi joogs
ARRIMAHA BULSHADA: DHACDO RUN AH - QABIIL BAA DUMIYEY QOYSKEYGA
Muraal dilaac kuu roonaa iney isla hadasho ayey ku sigatay gabadhu maalintaasi oo hadaan dhaqtar-ka la geyn bey nasiib laheyd, markaan u sheegay in Feysal uu diyaar u yahay in xiriir dhex maro labadooda. Maalintaa waxaan ogaaday oo yaabna igu riday heerka uu gaarsiis
QUBANE CAYAARAHA: CAYAARYAHAN MUSTAQBAL LEH
Ciyaaryahan Cabdiqani Maxamed Barre oo ku magac dheer \_"Aar\_", Waxaa uu ku dhashay Gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco Sannadku markuu ahaa 1976kii, hase yeeshee waxaa uu ku barbaaray magaalada Muqdisho oo uu ku bilaabay dugsi quraanka. Waxbarashadiisa dugsiga hoose/dhexe waxaa uu k
GABAY - CILMI BOODHARI: HODAN
Ayadoon xabaal lagu hamsiin waanaan ka
SIYAASADA - MAXAA DIB UDHIGA MIRAHA HESHIISKA SHIRARKA SOMAALIDA
Shaki kuma jiro in eey Soomaalida xoriyadeeda u soo martay halgan & dadaal dhiig badani ku daatay laga soo bilaabo tan & dagaalkii gumeystaha eey la galeen. Halgamayaashii ummadda Soomaaliyeed rag & dumar waxeey dhiig qaraar cabsiiyeen kuwii u holaday in eey gumeystaan shacabka Soomaaliye